Dastabej » नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको डेढ अर्बको शेयर किन्ने सुनिल शर्मा को हुन ?
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको डेढ अर्बको शेयर किन्ने सुनिल शर्मा को हुन ? – Dastabej
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको डेढ अर्बको शेयर किन्ने सुनिल शर्मा को हुन ?
नेपाली कांग्रेसका महासमितित सदस्य छन् ।सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले उनको अनुसन्धान गर्दैछ । शर्माले आइएस्सी प्रमाणपत्र नक्कली बोकेको प्रहरी बताउँछ। नोबेल सञ्चालक हुनुपूर्व शर्मा चीनका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी ओसार्ने गर्थे। विद्यार्थी ओसार्दैगर्दा उनले त्यतैबाट एमबिबिएस प्रमाणपत्र लिएको बुझिन्छ। शर्माको एमबिबिएस शैक्षिक प्रमाण पत्रमा पनि राज्यका निकायहरूले शंका गर्ने भने गरेका छन्।
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको ५१ प्रतिशत बढी शेयर किन्ने अन्तिम तयारीमा रहेका बिराटनगरकोनोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौंको पिपुल्स डेन्टल कलेजको स्वामित्वमा केएमसी मेडिकल कलेजका मालिक डा. सुनिल शर्मा फेरी चर्चामा आएका छन् । गत वर्षमात्रै १ अर्ब ७० करोडको रेयर किनेका उनले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको ढेड अर्बमा आधा बन्दा बढी सेयर किन्न लागेका हुन । अखिर हुन त डा. शर्मा ? जानकारहरुका अनुसार करिव दुई दशक अघि उनी चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको ल्याब टेक्निसीयन थिए । पछि डाक्टर चाईनाबाट पढे । हाल नेपाली कांग्रेसका महासमितित सदस्य छन् ।
सेतोपार्टीले मंगलबार, भदौ १६, २०७७ मा प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार अस्पतालको सेयर किन्ने शर्मा बने काठमाडौं मेडिकल कलेजका अध्यक्षसमेत छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले उनको अनुसन्धान गर्दैछ । ९ जना सञ्चालकहरूको सामूहिक सेयरमा चलिरहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा २५ प्रतिशत लगानी गर्दै शर्मा अध्यक्ष भएका थिए । यो लगानी लकडाउन खुलेलगत्तै बढाएर ४७ प्रतिशत हुँदै ५१ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने शर्माको लक्ष्य थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले शर्मा र उनको नोबेल मेडिकल कलेजको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेकै बेला चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो लगानी मानिएको केएमसीको झन्डै आधा हिस्सा शर्माले खरिद गरेका थिए । हाल उनी नृपालगन्ज मेडिकलको शेयर किन्दै छन् । केएमसीको भक्तपुरमा ३८ र काठमाडौंमा १५ रोपनी जग्गा छ। यसबाहेक भवन र उपकरणहरू छन्। केएमसीले सय सिटमा एमबिबिएस र २० सिटमा बिडिएसको शैक्षिक कार्यक्रम चलाउँछ। यसबाहेक एमडी र बिएस्सी नर्सिङका कार्यक्रम पनि चलाइरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले ९ महिनाअघि मंसिर १ गते नोबेलमा छापा मारेको थियो। नोबेलको स्वामित्व लिँदा शर्माले गैरकानुनी बाटो अपनाइएको, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, स्वामित्व लिँदाको कानुनी(आर्थिक दायित्वलगायतबारे विवाद छन्। शर्माको सम्पत्ति र नोबेल मेडिकल कलेजको सेयरबारे छानबिन चलिरहेकै छ । सञ्चालक सम्पत्तिर र सेयर कारोबारको वैधताबारे प्रश्न उठेपछि हामीले कागजात जफत गरेका थियौं, छानबिन चलिरहेकै छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान चलिरहेकै बेला नयाँ सम्पत्ति जोडेको हो भने त्यो नोटिसमा राख्छौं।’ विभागले चितवन मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा पनि सँगसँगै छापा मारेको थियो। ती मेडिकल कलेजका भर्नासम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजातहरू जफत गरिएको थियो। नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिशचन्द्र न्यौपाने हुन्। शर्मा एकल सञ्चालक रहेको नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा छँदैछ। त्यसका अध्यक्ष शर्माका बुवा लोकनाथ न्यौपाने र प्रबन्ध निर्देशक उनकै श्रीमती इन्दिरा न्यौपाने बराल हुन्। नोबेलले एमबिबिएसमा १०० र बिडिएसमा ४० सिटको शैक्षिक कार्यक्रम चलाइरहेको छ।
को हुन् शर्मा ?
शर्मा नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्। शर्मालाई नेपाली कांग्रेसले २०७४ मा प्रतिनिधिसभा चुनावमा मोरङ (३ ) बाट उम्मेदवार बनाएको थियो। उनी तत्कालीन एमाले उम्मेदवार भानुभक्त ढकालसँग पराजित भएका थिए। नेपाल प्रहरीका अनुसार शर्माको आइएस्सी प्रमाण(पत्रमा कैफियत देखिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २०७३ सालमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर समात्ने अभियान ‘अपरेसन क्वाक’ चलाउँदा शर्मा फरार भएका थिए। त्यतिबेला ब्युरोमा कार्यरत् एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगरबाट डाक्टरहरू पक्राउ गर्दा शर्मा फेला परेका थिएनन्। शर्माले आइएस्सी प्रमाणपत्र नक्कली बोकेको प्रहरी बताउँछ। नोबेल सञ्चालक हुनुपूर्व शर्मा चीनका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी ओसार्ने गर्थे। विद्यार्थी ओसार्दैगर्दा उनले त्यतैबाट एमबिबिएस प्रमाणपत्र लिएको बुझिन्छ। शर्माको एमबिबिएस शैक्षिक प्रमाण पत्रमा पनि राज्यका निकायहरूले शंका गर्ने भने गरेका छन्।
शर्मालाई २०७० सालमा नक्कली प्रमाण पत्रमा एक पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बयान लिएको थियो। तर, शर्मा केही दिनमै अख्तियारको फन्दाबाट उम्किएका थिए। ब्युरोले खोजी गर्न थालेपछि शर्माले तीन महिना नेपाल छोडेका थिए। सेयर सदस्यमात्र रहेका शर्माले नोबेलका चार जना सञ्चालकबाट एकलौटी नोबेल मेडिकल कलेज हत्याएको आरोप छ। सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा। ज्ञानेन्द्र गिरीलाई काठमाडौं विमानस्थलबाटै अपहरण गराएर शर्माले नोबेल आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसबेला माओवादी नेता तथा वर्षमान पुनले घाएकाले पुनसँग शर्माको ‘कनेक्सन’ अहिले पनि राम्रो मानिन्छ।
दुई अर्बभन्दा बढी चलअचल सम्पत्तिका मालिक भनिएका नोबेल अस्पताल सञ्चालक शर्माको विभिन्न ठाउँमा करोडौं लगानी छ। शर्मा यति छोटो समयमा त्यत्रो सम्पत्ति र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमताका कसरी भए कुनै निकायले राम्रोसँग अनुसन्धान गरेको भने छैन। शर्माले आफ्नो सम्पत्ति श्रीमती र नातेदारका नाममा सेयरमार्फत छिराएका छन्। नोबेल अस्पतालबाहेक शर्माको काठमाडौंमा पिपुल्स डेन्टल कलेज, मेडिकल इन्स्टिच्युट, घर र मोरङकै विराटनगर, बेलबारी र हसनदहमा जग्गा छ। आन्तरिक राजश्व विभागको अनुसन्धानमा पर्दा करिब सात वर्षअघि शर्माले नोबेलमा एक अर्बको कारोबार रहेको स्वीकार गरेका थिए। तर, बैंक अफ काठमाडौंलगायत विभिन्न बैंकमार्फत नोबेलमा दुई अर्ब बढी लगानी देखिएको थियो।
शर्मा २०६४ सालमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालामार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सम्बन्धन दिलाएपछि सेयरधनी बनेर भित्रिएका थिए। निकटस्थका अनुसार लेटाङमा माध्यमिक तह पढ्दा राजेन्द्र नाम गरेका उनी त्यहाँ एसएलसी फेल गरेपछि कालीकोट जिल्ला गए। उताबाट फेरि ९ कक्षादेखि अध्ययन गरेर एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास भएर फर्किँदा सुनिल भइसकेका थिए। २०५९ सालमा स्थापना गर्दा डा। ज्ञानेन्द्र गिरी अध्यक्ष रहेको नोबेल मेडिकल कलेजमा २८ करोड लगानी थियो। नोबेललाई सम्बन्धन दिलाउने सर्तमा सुनिल त्यसमा १६ प्रतिशत सेयर लिएर छिरेका थिए। डा. कोइराला मार्फत २०६४ सालमा उनले सम्बन्धन दिलाएको समयमै माओवादी नेता वर्षमान पुनमार्फत शर्माले गिरीसहित नवराज पाण्डे, आदित्य खनाल, उमेश पाण्डे लगायतलाई काभ्रे कामीडाँडा पुर्‍याएर मरणासन्न हुनेगरी पिटाएपछि सबै सञ्चालक नोबेलबाट अलग भए। अन्य सबै सञ्चालक हटेपछि नोबेलमा शर्माको एकलौटी छ।
६ श्रावण २०७८, बुधबार १८:१२ प्रकाशित